Dowladda Qadar oo iska Fogaysay Eedaymo loo soo Jeediyay – Radio Daljir
Dowladda Qadar oo iska Fogaysay Eedaymo loo soo Jeediyay
Luulyo 8, 2015 3:14 b 0
Arbaco, Luuliyo 08, 2015 (Daljir) — Amiirka dalka Qatar, Shaeekh Tamiim Bin Xamad Aalka labaad, oo la hadlay saxafadda, ayaa soo hadalqaaday dalalka Masar, Suuriya, Ciraaq iyo Yaman.
Mar uu ka hadlay mashaakilka ka aloosan dalka Masar ayuu yiri: “Waxa ka socda dalka Masar waa wax u baahan wada xaajood iyo in caqliga loo noqdo. Moowqifkeena ku aadan waxa ka socda dalka Masar waa mid barbartaagan Xaqqa iyo Cadaaladda”.
Amiirka oo aad mooday inuu iska difaacayay tuhuma jira, kuwaasoo ah in dalkiisa si gaar ah u taageero ururka Ikhwaanka dalka Masar, ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Waxaan isku haleyn ku qabnaa muwaadinka carbeed, oo hadda fahmay Xaqiiqada, Qadarna waxay la jirtaa xaqqa iyo cadaaladda.
Mowqifkeena ma aha mid si gaar ah u quseeya, ururka Ikhwaanka, ama koox kale oo gaar ah. Qadar waxay xilli hore iyo haddaba barbar taagan taahy rabinaanka shucuubta caaalamka, waxaa taas u daliil ah, Taageeradeeda ku aadan dalka Tuniisiya iyo madaxweynihiisa, mana aha “islaamiyiin” ayuu Amiir Tamiim hadalkiisa sii raaciyay.
Dhanka dalka Yaman ayuu Amiirka sheegay in dalkiida uu gadaal ka taagan yahay dalka Sacuudiga, islamarkaana uu Sacuudiga ku taageerayo waxuu awood hayo, sidii loo xasilin lahaa dalka Yaman.
Ugu dambeyn, dalka Suuriya ayuu Amiirka Sheegay in xal u helid la’aanta dhibaatooyinka haysta shacabka Suuriya, ay sabab u tahay xagjirnimada, waxuuna sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loo daweeyo, waxa keenay xagjirnimada.
Jubbaland oo Qorshaynaysa weerar ka dhan ah Al-shabaabta Gedo